बालबालिकालाई दीर्घकालीन असर गर्ने विशालु वायु – Health Post Nepal
बालबालिकालाई दीर्घकालीन असर गर्ने विशालु वायु
२०७८ कार्तिक २८ गते १०:३७
गतवर्ष चैतमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा वायु प्रदुषणले निकै असर गर्यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयललगायत विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर घरबाहिर खुल्ला स्थानमा नबस्न र मर्निङ वाकमा नजान अपिलसमेत गरे।
अहिले भारतको नयाँ दिल्लीसहित नेपालसँग सीमा जोडिएका केही क्षेत्रमा वायुप्रदुषण बढ्न थालेको छ। दिल्लीको प्रदुषण नेपाल नभित्रिएला भन्नसक्ने अवस्था छैन। दिपावलीदेखि दिल्लीमा देखिएको प्रदुषण अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन। शनिबार त त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले दुई दिन लकडाउन गर्न सुझाव नै दियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले वायु प्रदुषणकै कारण हरेक वर्ष करिब ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको बताएको छ। उसले वायु प्रदुषणको मात्रा कम गर्दामात्रै पनि ८० प्रतिशत मृत्यु रोक्न सकिने बताएको छ।
चिकित्सकहरुले वायु प्रदूषणले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा झनै गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले प्रदूषणबाट बालबालिकाहरुलाई दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। वायु प्रदूषणको असर बालबालिकाहरुमा अहिलेभन्दा पछि बढी देखिने सर गंगाराम अस्पतालका डा. धिरेन गुप्ताको भनाई छ।
‘बालबालिकामा प्रदुषणको असर अहिले के देखिएको छ र? त्योभन्दा बढी असर त पछि देखिन्छ, त्यसैले यो धेरै गम्भीर र दुरगामी समस्या हो,’ उनले भने। बालबालिकामा यसले पार्ने असरका बारेमा चिन्ता, चासो र गाम्भीर्यता अधिकांशमा नदेखिनु अर्को चिन्ताको विषय भएको उनको टिप्पणी छ।
विशेष गरेर बालबालिकामा स्वासप्रस्वाससँगै मानसिक समस्या पनि देखिनसक्ने उनले बताए। साथै आँखा पिरो हुने र घाँटी चिलाउने असर तत्काल नै देखिएको र त्यस्ता बिरामीहरुको संख्या अत्याधिक रहेको उनले जानकारी दिए।
वायु प्रदुषणका कारण मानिसमा मुटुको रोग र स्ट्रोक झन् बढ्नसक्छ। बालबालिका र वृद्धहरूमा फोक्सोको समस्या निकै बढाउनसक्छ। नेपालमा पनि वायु प्रदुषण बढ्दो छ। गत वर्ष काठमाडौं विश्वकै उच्च वायु प्रदुषणयुक्त सहरको सूचीमा परेको थियो।
वायु प्रदुषणले कोरोना संक्रमितको मृत्युदरलाई पनि बढाउने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्ययनले देखाएको छ। वातावरण प्रदुषण र कोरोना संक्रमितको मृत्यु सम्बन्धमा परिषदले गरेको अध्ययनमा २५ प्रतिशतले संक्रमितको मृत्यु हुने सम्भावनालाई प्रदुषणले बढाएको उल्लेख छ।